NAXDIN: QISADA Ciyaartoy Manchester United Ah Oo Xanuun Halis Ahi Ku Dhacay, Qaabkii DHIMASHADA Looga Badbaadiyey Iyo Magaciisa Oo Uu Garan Waayey Markii Uu Soo Kacay – Latest Sports News
NAXDIN: QISADA Ciyaartoy Manchester United Ah Oo Xanuun Halis Ahi Ku Dhacay, Qaabkii DHIMASHADA Looga Badbaadiyey Iyo Magaciisa Oo Uu Garan Waayey Markii Uu Soo Kacay
Qisada ciyaartoy ku qoran diiwaanka xiddigaha Manchester United ayaa laga badbaaday dhimasho kaddib markii uu madaxa kaga dhacay xanuun halis ah.
Cusbitaalka ayaa loola carraray, kaddibna dhaaweyn maskaxda ah ayaa loo sameeyey, waxaana loo sheegay in haddii uu hal maalin dib uga dhici lahaa dhakhtarka inuu u geeriyoon lahaa xanuunkan kusoo booddada ah.
Karel Poborsky oo u dhashay Czeck Republic waxa uu ka mid ahaa ciyaaaryahannadii Manchester United u ciyaarayay sannadihii u dhexeeyey 1996 illaa 1998-kii, laakiin xagaagii 2016 ayaa uu dhimasho ka badbaaday markii uu xanuunkani haleelay.
Laacibkan hore oo ay hadda da’diisu tahay 47 jir, ayaa waraysi uu siiyey wargeyska The Guardian ee kasoo baxa waddanka UK, waxa uu uga warramay sidii ay wax ugu dhaceen.
“Haddii aan cusbitaalka hal maalin ka daahi lahaa, waraysigan maantu ma dhaceen (waan dhiman lahaa).” Ayuu ku bilaabay hadalkiisa.
“Cusbitaalka ayaan tegay waqti aad u dambaysa, waxaana la ogaaday inuu infakshan ku dhacay mid ka mid ah xiddiddada maskaxda, si degdeg ah ayay dhakhaatiirtu Koomo ii geliyeen. Markii aan soo kacay, waxaan weydiiyey magacaygu waxa uu yahay. Dhamaan muruqyada wajigayga waxa curyaamiyey infakshan maskaxda igaga dhacay.” Ayuu sii raaciyey.
“Saddex toddobaad ayaan xaalad karantiimo ah ugu jiray cusbitaalka oo aan daawooyin ANTIBAAYOOTIK awood badan leh ka qaadanayey xididdada. Waxba maan cuni karaynin, indhahayguna way daboolnaayeen sababtoo ah iftiinka ayaa i dhibayey, aad ayaanan u cabsanayey.” Ayuu mar kale yidhi.